Lamaane Udhashay Wadanka Switzerland oo Ubad isku Dhalay iyagoo afduub loo heysto. - iftineducation.com
aadan21 / March 13, 2012
Lamaane Udhashay Wadanka Switzerland
iftineducation.com – Wixii ugu hadal heynta badnaa aduunka ayaa noqday lamaane udhashay wadanka Switzerland iyagoo ku jira gacanta koox afduubayaal ah ubada iska dhalay.
Olivier David Och, oo 31 jir ah iyo Daniela Widmer,oo 28 jir ah ayaa afduub loogu heysto buura leyda udhaxeysa wadamada Pakistan iyo Afganistan waxaana ay gacanta ugu jiraan ururka Taliban.
Lamanahaan ayaa laga qafaashay duleedka magaalada Belutshistan oo ku taal dalka Pakistaan waxaa ayna xiligaas halkaas ku joogeen Fasax iyo indha indheeyn Roobab lixaad leh oo Degmadaas dhibaatooyin kala duwan ka geeystay.
Can jalad maqal aheyd oo ay soo direen kooxda Taliban ayey ku sheegeen in Daniela Widmer ay cunug dhashay taas oo la yaab ku noqotay malayin qof oo ku nool aduunka.
Afhayeen uhadlay kooxda heystay lamaanahan oo wajiga qarsaday ayaa canjaladaan ku sheegay in ay lamanahan siiyeen fursad ay ku kulmi karaan.
Kiiska Lamaanahaan ayaa waxa uu dood kulul ka dhaliyay gudaha dalka Switzerland ka dib markii lagu eedeeyay Wasaarada Arimaha Dibada ee dalkaas ineey dhoor jeer ku Guuldareeysatay isku day lagu doonayay sii deeynta Lamaanahaan oo oo lacag xoogan u xayiran .